गफ ! .....: म हाँसेको कुरा - भाग २
हा हा हा हा, आज बिहान बिहानै ब्लग चाहर्दै थिएं, तपाईको पोष्ट पढेर म पनि खुव हाँसे।
अनि त्यो तपाईको फोटिकपिको खोजी गर्नु भएन ?
तर तपाईको भाग १ को साईकलको कथा चाहि यो सबै भन्दा बेजोड छ, त्यो सम्झदाँ म अहिले पनि हाँस्छु ।
यो चाँहि साह्रै रमाइलो लाग्यो है !
तर पनि अरु माथि हाँस्नु मुर्खता ठहरिने हो कि ?
मलाई चाहि नि दीपकजी पहिलो भागमा निकै हाँस उठेको थियो। यो पल्ट पनि रमाइलो प्रसंगहरु रहेछन्। तर पनि पहिलाको जस्तो हासो चाहि उठेन। पढ्न चाहिँ मजै लाग्यो है।
मलाई त हास पनी उठ्यो र राम्रो पनी लाग्यो -"छेउ छेउमा हाल् बिचमा गन्धैले मर्छ" जहाँ शब्द ठेट लागे । ठ्याकई मिले जस्तो लाग्यो ।
तपाईको हासो शेयर गर्नु भएको मा धन्यबाद । है दीपक जी ।
बाब्बा ऽऽ उधुम नै गर्नुभयो जडितजी ! हाँस्ने बहाना नपाइने आजको जस्तो तनावपूर्ण समयमा कति मीठो काउकुती लगाउनुभएको ! यसरी ब्लगको बयानले हलहली हँसाएको तपाइँकै बाहुलीबाट पहिलोचोटि भयो । भाग एक पनि निकै मन पर्‍यो । जीवनमा कति थरी मानिसहरू है ! कोही हँसाउने त कोही रुवाउने ।
प्रायजसो भुक्तभोगीले रुवाएको सम्झिराख्छन् र ओइलाएर बस्छन्, तपाईँसँग पनि रोएको र रुवाउने दु:खद् स्मृति पक्कै थियो । तर तपाईँले भने हँसाएको स्मृति पनि कति सुरक्षित राख्‍नुभएको रहेछ हाँसोको फोहोरा नै पस्किनुभयो । बडो पुन्य भयो हौ भावुकतामा पिरोलिनेहरूको लागि । तरकारी खेतीको प्रसङ्गले आफ्नो विगतमा लसुन र गोलभेंडा रोपेको सम्झिन पुगेँ ।
धेरैपछि इन्टरनेटको जालोमा बेरिन आइपुगेँ, माफी दिनुहोला है । लेखेर आफ्ना अनुभूति बाँड्नु त परकै कुरा, पढ्नबाट समेत वञ्चित भइयो । अब नियमित हुनेछु । नमस्कार साथै आभार ।
पहिले त सबैलाई आफ्नो हाँसेको , रोएको अथवा अनुभुति गरेको कुराहरु बाँडीलिन आईदिनुभएकोमा धन्यवाद , खासगरी हाँसेको कुरा भनेर आफ्ना संस्मरणहरु ( सानातिना नै घट्ना भएपनि मानसपटमा सजिब रहेका ) यसरी नै टाँस्दै जाने विचार गरेको छु । तपाईंहरुको प्रतिक्रिया पाउँदा यो पनि रमाईलो नै हुनेरहेछ भन्ने लागीसकेको छ ।
दिलीप जी , खै त्यो समयमा अलि अर्कै प्रकारको थिएँ क्यार - फोटोकपि खोजिँन हौ , अलिपछि खोज्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि लागेको थियो ।
अनि आकारजी , अरुको खिल्लि उडाउँदै हाँस्नु चैं मुर्खतानै हो पक्कै तर के गर्ने मान्छेको स्वभाव हो यो यौटा , मैले खिल्लि उडाएको भने हैन ।
कैलाशजी , अझै छन यस्ता सम्झन लायक घट्नाहरु हेरुँ पछि हँसाउन सक्छु कि ?
बेदनाथजीलाई पनि हँसाउन सकेछु खुशी लागेको छ र धाईवाजी , पक्कै आज पहिलो अभाव भनेको समय भएको छ र दोश्रो हाँसो खुशी भएको छ । बाँकी अभावहरु त गनिनभ्याई होलान् अहिले यि नै पहिलो र दोश्रोलाई सदुपयोग गरुँ अरु कुरा देखा जाएगा भन्ने लाग्छ है मलाई पनि । त्यसै कस्तो कस्तो प्रेसरमा भएजस्तो भएको छु म पनि । प्रतिक्रिया लेख्नधरी समय बटुलेर आउनु परेको छ । जीवन यस्तै होला क्यारे सकेसम्म फुर्सदमा भेट्दै हाँस्दै र माया गाँस्दै जाउँला न ।